Qalabkee tusaaleeyaha backlink ayaa iga caawin kara inaan dhiso bogga ku habboon ee xiriirka websaydhka?
Hagaag, dib u eegis tayo leh ayaa badanaa loo yaqaan qiimaha ay bixiyaan waayo-aragnimo badan oo ra'yiga user-friendly loo marayo bog kasta ama bogga bogga content. Sida xiriiro gudaha ah, oo qaab dhismeedkooda si wanaagsan loo abaabulay ayaa caawin doona martida rasmiga ah inay si qoto dheer u galaan qayb kasta oo mawduuca sahlan. Looma baahna in la yiraahdo booqashada dheer ee ay bixiso booqdaha kasta, tallaabooyinka intaa le'eg ayaa la qaadaa celcelis ahaan, awoodda badanna waxaa lagu siin doonaa makiinadaha waaweyn ee raadinta (sida Google laftiisa, iyo sidoo kale Yahoo iyo Bing). Dhab ahaantii, dib u eegis ayaa ka mid ah hitters ugu sareeya xukunka xukumada casriga ah ee SEO. Sidaa daraadeed, profile-kaaga boggaaga ayaa ah mid u qalma cilmi-baarista ugu yaraan labo qalab oo loo adeegsado indhoolayaasha, ma aha?
Loo dhajinta Dhismaha Geedi socodka Fulinta Fulinta
Laakiin sida loo helo saamiga ugu sarreeya ee Google SERPs? Sida loo sameeyo isticmaalka saxda ah ee dhabarka? Maxaad samaynaysaa markaad wax qaldamaan? Waa kuwee ciqaabta ugu badan, haddii ay sidaas dhacdo? Maxay tahay sababta aad u maarayn lahayd cilmi-baaris casri ah oo dhan kadib? Waa hagaag, waa marka ay madadaalo bilaabmayso - oo ay ka imanayso doorasho ballaadhan oo ah qalabyo muuqaal oo dib u qabsi ah. Haa, waxay kaa caawin karaan inaad dhisato astaanta aad ku wanaagsan tahay ee xiriirinta websaydhka. Qalabkee tusaaleeyaha dib-u-daaweynta waa inaad ka soo qaadataa caawiyahaaga sare? Aynu bilowno inaanu ku soo boodno!
3 Siyaabaha Hore Loo Hibeeyey "Fikradda" Farsame Xidhiidh
Ka hor intaanan billaabin, aan hubinno inaan raacno seddexdan farsamooyinka dhismaha ee caadiga ah si loo sameeyo "habboon" - Qalabka sawir-qaadaha ee dib-u-qabsiga ama qaab-dhismeed kasta oo falanqeyn ah ayaa ka caawin kara bilowga saxda ah. Taasi waa sababta aad uga fogaato inaad ka fogaato Black-Hat SEO-ga sida cudurka, waxaad kugula talineysaa inaad isku taxalujiso isku daygaaga soo socda:
Xusuusnow, mar walba had iyo jeer waa boqorka, Raadinta goobta raadinta. Waxaa loola jeedaa inaad mar walba ku dhajiso waxyaabaha tayada leh ee bixiya qiimaha - marka hore iyo ugu horreyn.
Dib u qaabeyn dib-u-qabasho cusub wuxuu ku noolyahay kaliya kaddib xaqiijinta saxda ah iyo cadeyn taxadar leh.
Ka ilaali ganacsiga ama bedelida dhabarka kharashka oo dhan, marna ha codsanin PBNs (shabakadaha gaarka loo leeyahay).
Ma taqaanaa dhamaantiis?
Maxaa laga yaabaa in la yaab leh in milkiilayaasha boggaga hore ee halyeeyada ah ay tahay in aan fogeyn dhammaan iskuxiryada la abuuray dabeecada. Ma hubtaa inaad dhisayso iyaga ujeedada saxda ah? Ka dib oo dhan, taariikhdaada hadda ee xiriirka webka waa inay awoodaan inay ka soo baxaan filashooyinka ku filan ee SEO ah? Aynu samayno farqiga - wax walbaa waa in dhabarka dhabarka loo istcimaalo si ay u bixiyaan faa'iidooyin aad u muhiim ah oo si buuxda loogu cabbirayo SEO. Inkastoo kuwa kale aysan haysan miisaan dhab ah, oo ay u arkaan makiinadaha waaweyn ee raadinta sida gebi ahaanba diidan yihiin. Wax badan oo kale - halkan waxaan ku soo galeynaa isku xirnaan sax ah - xaqiiqda, dhabarka, sidoo kale waxa dhici karta in xataa xitaa waxyeello, gaar ahaan marka isticmaalka noocan ah ee aan habbooneyn la xisaabiyo muddada dheer.
Ku dhajinta Ingiriisi cad, xiriiro kala duwan ayaa loogu talagalay inay ku yimaadaan dhowr dhadhan oo kala duwan - wareejinta (ama loogu talagalay in lagu gudbiyo) iyada oo loo marayo albaabka gadaal u jeedda SEO. Waxaan loola jeedaa furaha gadaal ujeedka raadinta isbedelka PageRank (a. k. a. TrustRank) Nidaamka mitirka tayada ee muhiimka ah ayaa laga keenay 0 ilaa 10. Isticmaalka qeexida asaasiga ah guud ahaan waa la aqbalaa si loogu badalo muhiimada ay leedahay bogga internetka ee muhiimka ah, kalsoonida, iyo awoodda u lahaanshaha tusaalaha asalka ah ee saxda ah.
Sidaa daraadeed, aan mar kale sheegno - ka hor intaan wax kale jirin, "profile ideal" ee boggaaga "ideal" waa in la helaa oo keliya dhinaca dhabarka saxda ah. Marka laga eego SEO, macnaheedu waa in aad iska ilaaliso habka loo yaqaan "Redirect" iyo "No-Follow Follow links," ama ugu yaraan iska ilaali iyaga oo aan ujeeddo macquul ah. Xidhiidhinta xidhiidhka
Xidhiidhinta tooska ah waxay u taagan tahay nooca khaaska ah ee ku xiran xagga xakabaynta (badanaa ku qoran PHP) - inuu kuu geeyo bogga loogu talagalay iyada oo loo marayo bogga dhexe (gudaha isla martigeliyaha guriga ), halkii aad toos ula xiriiri lahayd bartilmaameedka hal tallaal.
Maya - Rakib raaci waxay ku dhex jiraan Nofollow HTML attribute value. Noocyada noocaan ah waa qaylo dheer oo ka yimid fikradda asalka ah ee hyperlink loogu talagalay ujeedooyinka SEO ee qeexidda. Sidaa darteed, halkii laga qoondeeyn lahaa SEO, xiriirinta Nofollow waxay si toos ah u direysaa URL ee bartilmaameedka hal-talaabo ee hal-dhaqdhaqaaqa - ma siinayo hay'ad amar ama kalsooni ammaan. Dabcan, No-Links raacsan waxaa loogu talagalay sababo ah sababo - tusaale ahaan, waxay u adeegayaan inay iska caabbaan noocyada kala duwan ee spam engine search (haddii kale, si looga hortago spamdexing). Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in albaabka laga furo waayo khibrad aadanaha bini'aadamka oo keliya (i. e. , ma gudbaan juice-juice). Sidaa darteed, isticmaalka sifududaha xiriirka ee "No-Follow Follows" waxay noqon kartaa go'aan fiican oo la sameeyay, e. g. , gaar ahaan kuwa webmasters iyo mulkiilayaasha goobta si ku-meel-gaadh ah ula xiriirinaya bogagga spam sabab qaar.
Macaashka 'Smart Pick'
Dhamaan wax walba oo jira, aan dib ugu soo noqnoqon karno wada hadalada hadda - taas oo qalabkee taageerayaasha dib u qabsoomi kara inay ku sameeyaan habka kuhaboon ee xiriirrada websaydhka? Hagaag, taasi waxay ku xiran tahay. Si fudud sababtoo ah waxaan tijaabiyey qalab farsamo oo kala duwan illaa sannadkii dhawaa - iyada oo dhammaan muuqaalada gaarka ah, iyo nasiib darro nasiib darro ah labadaba. Aniga ahaan, waxaan ka helay fursadaha soo socda kuwa ugu macquulsan - Moz's Open Site Explorer (Moz), Falanqaynta Naqshadeeynta (Semalt), Qalabka Sare ee SEO, iyo Ahrefs Backlink Viewer / Checker Tool. Dabcan, waxaa kaliya oo kaliya in aad go'aansato - laakiin waxaan ku adkeysanayaa inaad isku dayday mid kasta, ugu yaraan si kooban. Xusuusnow, in aan u imid doorasho si wanaagsan loo qaabeeyey iyada oo la adeegsanayo qalabka ugu fiican ee daawadayaasha dib-u-eegista iyo samaynta barnaamijyada falanqaynta - iyadoo tixgelinaysa qiimaha dhabta ah ee talooyinkooda, xirfad adeegsi oo tayo leh, habka ugu habboon ee doorashooyinka aasaasiga ah, iyo natiijooyinka kama dambaysta ah, oo ay ku jiraan fikrado aad u fiican oo tartan ah.
. Waxaan loola jeedaa ka hor inta aanad sahaminta cusub ee cusub ee aad la socotid qalabka soo-dhawrista ee cusub ee soo dhaweynta, waxaad si fiican u hagaajin lahayd. Hesho bilawga nadiifka ah - Isticmaal qalabka Google ee qalabaynta si aad uga takhalustid wax kasta oo waxyeelleyn kara istaraatiijiyada SEO-gaaga miisaanka, ama ugu yaraan hoos u dhigista tayada marxaladda dhabarkaaga ilaa xad. Gaaban, xiitaa haddii aad dareento wax laga shakiyo oo ku saabsan bogga gaarka ah ee aad la xiriirto - ka taxadar inaad ka takhalusto wixii saameyn ah. Sidaa oo kale, isticmaal qalabka naceybka ah si aad "u sheegto" Google si aan u tixgelino xiriiriyahan qariibka ah ee aadan weli hubin, ugu yaraan daqiiqad. Sidaa daraadeed, webmasters badan oo xirfadlayaal ah ayaa adeegsanaya qalabkan aasaasiga ah (halkii ay ka muuqan lahaayeen calaamadaha caanka muuqaalka ee caanka ah) - kaliya inay dib ugu noqdaan oo dib udhigaan, hagaajiyaan, ama sameeyaan farsameyn degdeg ah oo ku saabsan waxqabadyadii hore ee SEO-yada ah ee ay ku hayaan haynta qaas ah tixgelinta Source .